साग आयोजना र पूर्वधारमा चार अर्बभन्दा बढी खर्च : RajdhaniDaily.com
Home खेल साग आयोजना र पूर्वधारमा चार अर्बभन्दा बढी खर्च
काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले झन्डै एक वर्षपछि १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)को खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ । राखेप सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले वाचा गरेभन्दा नौ महिनापछि आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सागको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
राखेपले साग आयोजना भएको तीनै स्थान (काठमाडौं उपत्यका, पोखरा र जनकपुर)को हिसाब समयमा नआएको र यसबीचमा कोरोना महामारीको कारण आफूले बाचा गरेभन्दा हुन पुगेको भन्दै माफीसमेत मागेका छन् । सार्वजनिक खर्च विवरणअनुसार साग खेलकुदतर्फ १ अर्ब ३१ करोड ७८ लाख ४३ हजार ६१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै पूर्वाधार निर्माणतर्फ विगतका वर्षहरूदेखि हालसम्म २ अर्ब ८६ करोड १४ लाख २८ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँँ खर्च भएको सदस्यसचिव सिलवालले जानकारी गराए । यसर्थ सागकै लागि कुल ४ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको राखेपले जनाएको छ ।
यस्तै सागमा पदक विजेता खेलाडी, प्रशिक्षक र सहभागी राष्ट्रिय टोलीलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट २२ करोड ७६ लाख रुपैयाँलाई राखेपको खर्चमा नजोडिएको सदस्यसचिव सिलवालले बताए । सागका लागि ५ अर्ब ६९ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएकोमा सरकाले ३ अर्ब ६५ करोड विनियोजन भएको थियो । सागमा सरकारबाट १ अर्ब २३ करोड १८ लाख ४८ हजार, टिकट बिक्रीबाट २ करोड ६७ लाख ११ हजार ६७५, विज्ञापनबाट २० लाख ९ हजार ९ सय १५ र सहभागी राष्ट्रबाट ११ करोड २१ लाख ३५ हजार ५ सय ९८ रुपैयाँ आय भएको सदस्यसचिव सिलवालले जानकारी गराए ।
यस्तै, खर्चतर्फ १ अर्ब ३१ करोड ७८ लाख ४३ हजार ६१ संलग्न विवरणबमोजिम खर्च भएको छ । यस्तै, ३ करोड ५५ लाख ७१ हजार १ सय ३७ बैंक मौज्दात रहेको र १ करोड ९३ लाख ८० हजार २ सय २४ फ्रिज भएको राखेपले जनाएको छ ।
ब्याडमिन्टन म्याट, कबड्डी म्याट, बास्केटल म्याट, टेबल टेनिस म्याट र पदक, किड्ससम्बन्द्ध केही सामग्रीमा ४ करोड ८१ लाख ३० हजार सहयोग स्वरूप प्राप्त भएको राखेपले जनाएको छ । सागको उद्घाटन र समापन समारोहमा मात्रै ११ करोड ५९ लाख, ८८ हजार ८ सय ४ रुपैयाँँ खर्च भएको विवरण राखेपले सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै, होटल बसोबासमा १३ करोड ५९ लाख, ६७ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँँ खर्च भएको छ । खेल सामग्री व्यवस्थापनमा २८ करोड २२ लाख, ८३ हजार ८ सय ८१ रुपैयाँँ, राष्ट्रिय टिम व्यवस्थापनमा ३० करोड ८० लाख, ८१ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँँ खर्च भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस दुवाथनल सिरिज कीर्तिपुरमा
सचिवालय खर्च (काठमाडौं) ६ करोड ७४ लाख, ५६ हजार ४ सय ७९, पोखरामा ७ करोड, ६२ लाख, ९८ हजार २ सय २४ र जनकपुरमा ८० लाख ३७ हजार २ सय १२ रुपैयाँँ खर्च भएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणतर्फ दशरथ रंगशाला पुर्ननिर्माण, सातदोबाटो हिटिङ पुल निर्माण, सातदोबाटो स्क्वास कोर्ट निर्माण, तेक्वान्दो र कराते एकेडेमी निर्माण, च्यासल रंगशाला निर्माण, लन टेनिस कोर्ट निर्माण, लैनचौर कभर्डहल मर्मत, कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान तथा कभर्डहल मर्मत तथा निर्माण, पोखरा रंगशाला निर्माण, पोखरा साग भेन्यु निर्माण र धनुषा कभर्डहल मर्मतमा खर्च भएको राखेपले जनाएको छ । १४औं साग पाकिस्तानले आयोजना गर्ने भए पनि यो एक वर्षको अवधिमा पाकिस्तान सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । पाकिस्तानले तोकिएको समयमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न असफल भए माल्दिभ्स र श्रीलंकाले संयुक्त रुपमा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने इच्छा देखाएको सिलवालले बताए ।
सागमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रका २७४६ खेलाडी ९०६ अफिसियलसहित कुल ३६५२ जनाको सहभागिता रहेको थियो । नेपालबाट ८३१ जनाले सहभागिता जनाएका थिए । साग गतवर्ष मंसिर १५ देखि २४ गते सम्म काठमाडौं उपत्यका, पोखरा र जनकपुरमा आयोजना भएको थियो । सागको इतिहासमा नै पौडीकी गौरिका सिंहले एकै सागमा ४ स्वर्ण, करोतका मन्डेकाजी श्रेष्ठ, तेक्वान्दोकी आयशा शाक्य र गल्फाका सुवास तामाङले दोहोरो स्वर्ण जित्न सफल भएका थिए । घरेलु भूमिमा भएको सागमा नेपालले कुल २ सय ७ पदक जितेको थियो । जसमा ५१ स्वर्ण, ६० रजत र ९६ कांस्य पदक रहेको छ ।
जबरजस्ती धर्म परिवर्तन र सजायको व्यवस्था
चन्द्रबहादुर बस्नेत - June 26, 2020
धर्म सत्य हो, धर्म प्रेम हो र धर्म जीवन दर्शन पनि हो । कुनै चिजवस्तु र व्यक्तिमाथि राम्रो पुण्यकर्म र विचारका लागि विश्वास गरिने...
हतकडी फुस्काएर भाग्ने अभियुक्त पक्राउ
राजधानी समाचारदाता - August 1, 2020
इलाम । अस्पतालबाट गत बिहीबार प्रहरीको हतकडी फुस्काएर भाग्ने अभियुक्त हिजो शुक्रबार पक्राउ परेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगरबाट सार्वजनिक नैतिकता विरुद्धको मुद्दामा...
युवतिलाई घर पु-याइदिन्छु भनेर ट्रकभित्रै बलात्कार
Breaking News राजधानी समाचारदाता - August 1, 2020
रौतहट । सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । रौतहटको फतुवा विजयपुरस्थित २१ वर्षीया युवतीलाई ट्रकमै सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा...
सर्वोच्चद्वारा सरकारलाई कर उठाउन ‘ग्रिन सिंग्नल’ अस्वीकार, लकडाउन अवधिभर कर बुझाउनु नपर्ने
Breaking News निराजन पौडेल - June 16, 2020
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर असुली प्रक्रिया रोक्ने गरी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अर्थ मन्त्रालय र राजस्व विभागले दिएको भ्याकेट निवेदन खारेज गरिदिएको...
खेल राजधानी संवाददाता - December 29, 2020
साफ च्याम्पियनसीप फुटबल प्रतियोगिता आगामी वर्ष बङ्गलादेशमा हुने भएको छ । दक्षिण एशियाली फुटबल महासङ्घ (साफ) को कार्यकारी समितिको सोमबार सम्पन्न भर्चुअल बैठकले साफ...
अर्थ मान बहादुर कुँवर - July 11, 2020
निषेधाज्ञाले बिपि जयन्ति कोठाभित्रै
राजनीति राजधानी समाचारदाता - September 9, 2020
सप्तरी, राजविराज । सधै खुल्ला स्थानमा भव्य रुपमा मनाइदै आएको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता स्व. विपि कोइरालाको जन्म जयन्ति यस...
Breaking News रमेश तिमलसिना - January 16, 2021
रौतहट । ६ लाख पाउने लोभमा सामूहिक बलात्कारमा परेँ भनेर झुटो जाहेरी दिने युवती पक्राउ परेकी छिन । २८ पुसमा ओखलढुंगा घर बताउने अन्दाजी...
दीपशंकर चौलागाई - January 22, 2021
एजेन्सी - January 20, 2021
यो पनि पढ्नुहोस जितबहादुर पुरस्कृत